Kuleli phephandaba siphakamisa ukukhuluma ngalokho amaseli beyomboza isikhumba. Uyini isikhumba, futhi kusukela lapho yakhiwa izingqimba. Ake uqale nge iqiniso ukuthi wenza imisebenzi eminingi, kuhlanganise:
nokuvikelwa uma umonakalo ngemishini;
nokuvikelwa uma umonakalo ezishisayo;
nokuvikelwa uma umonakalo bayo begazi;
Ngiyavuma, konke lokhu kudingekile ekuphileni kwethu. Isikhumba siqukethe izingqimba eziningana: i-epidermis, dermis kanye hypodermis. Namhlanje ikakhulu banake ungqimba phezulu - the epidermis. Cabanga, okuyindawo kwakheka ungqimba epidermis is, Uhlonze lwalo futhi esingakanani uyakwazi ukuvuselela ngokuphelele.
Ngakho iziphi amaseli we ebusweni isikhumba imbozwe? Lesi sendlalelo cell we epidermis. Sibona, kuba corneum stratum. Lokhu igobolondo esingaphili ke ekugcineni ishq off, okungukuthi, zife ngokuphelele. Esikhathini epidermis kukhona nhlobo imithambo yegazi. Kodwa amangqamuzana aphilayo zitholakala ezindaweni ezijulileyo lesi sendlalelo. Bahlukene futhi kancane kancane enze indlela yabo ukuba ungqimba phezulu, amaseli ngokwabo bafe ngesikhathi esifanayo futhi iguqulwe ibe ishq.
Ngaphansi lesi sendlalelo amanzi cishe akunakwenzeka ukuthola, kodwa izinto fat-encibilikayo ukungena cishe ngaphandle kwezinkinga. Kungani lokhu kwakwenzeka? Cell ulwelwesi yakhiwa fat, ziyakwazi sokuqeda abanye.
Njengazo zonke ezinye izitho, isikhumba sethu yakhiwa amaseli. Manje sihlaziya okuyinto amaseli beyomboza kwesikhumba, yilokho izinhlayiya iyona epidermis.
Into yokuqala Kuhle kokusho - kuyinto keratinocytes, okuyinto ukukhiqiza yi-keratin. Basuke zihlukaniswe amaqembu amathathu:
Keratinocytes zihlale ukunyakaza they nyakazo phezu Izendlalelo epidermis, efuna ukufinyelela topsheet. Ngalesi esikhiqiza iprotheni okuhlala kakhulu - yi-keratin. Lapho belahlekelwa core yabo, baba uthanda esikhwameni, manje abizwa ngokuthi corneocytes. Lapho amangqamuzana omzimba ukufinyelela phezulu, bese linyamalale, futhi le ndawo iyoba keratinocyte esilandelayo. Le nqubo kwenzeka ngokushesha umzimba ezisencane, kodwa wangena ubudala, zonke izinqubo ehlile.
Sasilawula ukuthi lapho amaseli beyomboza esikhumbeni, kodwa akashongo lutho mayelana ukushuba we ungqimba phambi kwethu. Akukhona njalo iyunifomu. Kukhona izindawo lapho ukushuba amamilimitha angu ezimbili, futhi kwezinye izindawo ilungu elithile lomzimba wethu kuba kumakhulukhulu ayisikhombisa milimitha. epidermis Iningi mncane ubeka alinganayo ukujiya polyethylene ifilimu.
Ngokwesibonelo, qhathanisa isikhumba phezu izithende, isandla kanye neso ubudala. Ngiyavuma, zonke ukujiya ezahlukene. Ikakhulukazi, on the izithende of actinic evelele futhi isikhumba amajwabu amehlo njalo bushelelezi futhi emnene. Izitho zokuzala futhi abe ungqimba elincanyana kakhulu epidermis (mayelana 0.1 kwangu).
Saxoxa umbuzo lihlanganisani kobuso ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu. Izwe elisizungezile - lena ngempela isihloko esithakazelisayo, okuvumela izingane ukuba zifunde izinto eziningi ezintsha nezithakazelisayo ukuthola emingceleni entsha ulwazi. Lesi sihloko kufakwe ngokuhamba cwaningo.
Kusukela isikhumba yokuvuselela kuxhomeke ekubukekeni kwethu, ngosuku umuntu ulahlekelwa mangqamuzana angaba yizigidi eziyizinkulungwane ezingu-10, ngokuhamba kwesikhathi, le nqubo kubambezela. Ngokwesilinganiso, ngonyaka umuntu Ukufikelwa ukushisa 20 khilogremu isikhumba. I enempilo futhi ezingaphansi kuka isikhumba yethu, bazolokhu iyona umzimba cell, ikhasi ubudala off futhi esikhundleni. Lapho ubudala umzimba, inqubo behlisa ijubane, bakhathala ngakho bavele imibimbi. futhi sebuningini izinto eziyingozi uya kanye amangqamuzana afile. Akukona zingene epidermis-bacterium ayingozi emzimbeni. Iyabuyekeza luthatha izinsuku ezingu 21 kuya ezinyangeni ezintathu, konke kuncike ubudala.
Umbuzo ka lihlanganisani kobuso ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu, Ibanga 4 izifundo zomhlaba kufanele ngempela zihlanganisa. Phela, kusukela ebuntwaneni abantu kufanele bazi ukuthi isikhumba - lena nesihlangu sethu. Uma ungenalo anakekele it, uzohlupheka umzimba wonke.
Udinga ukwazi nokuthi epidermis sihlanganisa izingqimba eziningana:
Ukuphishekela konke lokhu kwenza, ungqimba Horny siqukethe cishe 15 izingqimba. I engenhla cell izingqimba angabhekwa efile, ngoba abazange nethuba ukwabelana futhi ube core kwangaphakathi, ngakho bahlalaphi. kakhulu umngcele uhlukanisa amangqamuzana afile futhi ophilayo uku ungqimba olunameva.
Puzzle mnandi mayelana ikhabe ngoba guys kancane
Imithetho yokuziphatha nasezitimeleni. Imiyalelo kanye namathiphu abafundi
Isiqhingi esikhulu kunazo zonke eGreece. Kuhle Islands Greek